Yuusuf Garaad “Cabburin saxaafadeed waa ay daahin kartaa laakiin ma baajin karto faafidda xogta iyo xanta – Kalfadhi
Cabburin saxaafadeed waa ay daahin kartaa laakiin ma baajin karto faafidda xogta iyo xanta. Xiiso hor leh ayayba u yeeshaa.
Awoodda dooneysaa waxay faafreebka u adeegsan kartaa in ay iyadu isku cabburiso oo dhawaqa ay dhibsanayso aanuu dhegeheeda ku soo dhicin, sadarrada akhriskoodu damqayaana aanay gacanteeda soo gelin, muuqaalka ay diiddan tahayna aanuu indhaheeda u muuqan.
Waa sababta ay dalalka qaar u leeyihiin Idaacad Qaran oo aan soo hadal qaadin dhacdooyin hareeraheeda ka socda iyo xog aga taalla.
Si kale haddii loo dhigo, awoodda cabburin doorbiddaa indhaheeda iyo dhegeheeda ayay xukumi kartaa laakiin ma awdi karto dhegaha dadweynaha mana shareeri karto indhahooda.
Waa qaacidda guud, siiba caalamka maanta oo teknoolajiyadu ay warfaafintq geyeysiisay in ay noqoto qof walbow naftaa, war helkana gaarsiisay inta badan mar kasta iyo meel kasta.